AI Triple Camera များပါတဲ့ Vivo Y15 2019 ကို ကြေညာ – Myanmar Mobile App
AI Triple Camera များပါတဲ့ Vivo Y15 2019 ကို ကြေညာ
Posted on May 28, 2019 May 28, 2019 Author Ko Nyi	Comment(0)
Vivo က အိန္ဒိယမှာ Y15 2019 ကို ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ၆.၃၅ လက်မ HD+ LCD Screen ပါပြီး 720x1544p Resolution ရှိပါတယ်။ Octa-core MediaTek Helio P22 Processor , 4GB RAM , 64GB Storage များ ပါပါတယ်။ 256GB microSD Card စိုက်နိုင်ပါတယ်။ Android9Pie အခြေပြု Funtouch OS9မောင်းနှင်ထားပါတယ်။
အနောက်ဘက်မှာ 13MP f/2.2 + 8MP f/2.2 + 2MP f/2.4 AI Triple Camera များ ပါပါတယ်။ အရှေ့ဘက်မှာ 16MP Camera ထည့်ထားပါတယ်။ Portrait Bokeh , Live Photo, HDR, AI Beauty , Panorama , Pro Mode နဲ့ အခြား ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာ လက်ဗွေရာ ကိရိယာ ပါပါတယ်။ 5000mAh Battery ထည့်ထားပါတယ်။
Vivo Y15 (2019) specifications
5000mAh (typical) / 4880mAh (minimum) battery.
Aqua Blue , Burgundy Red အရောင်များ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ၂၃၀ ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။
AI Triple Camera မြားပါတဲ့ Vivo Y15 2019 ကို ကွညော
Vivo က အိန်ဒိယမှာ Y15 2019 ကို ကွညောလိုကျပါတယျ။ သူ့မှာ ၆.၃၅ လကျမ HD+ LCD Screen ပါပွီး 720x1544p Resolution ရှိပါတယျ။ Octa-core MediaTek Helio P22 Processor , 4GB RAM , 64GB Storage မြား ပါပါတယျ။ 256GB microSD Card စိုကျနိုငျပါတယျ။ Android9Pie အခွပွေု Funtouch OS9မောငျးနှငျထားပါတယျ။
အနောကျဘကျမှာ 13MP f/2.2 + 8MP f/2.2 + 2MP f/2.4 AI Triple Camera မြား ပါပါတယျ။ အရှဘေ့ကျမှာ 16MP Camera ထညျ့ထားပါတယျ။ Portrait Bokeh , Live Photo, HDR, AI Beauty , Panorama , Pro Mode နဲ့ အခွား ကငျမရာ လုပျဆောငျခကျြမြား ပါပါတယျ။ အနောကျဘကျမှာ လကျဗှရော ကိရိယာ ပါပါတယျ။ 5000mAh Battery ထညျ့ထားပါတယျ။
• 6.35-inch (1544×720 pixels) HD+ 19.3:9 IPS 2.5D curved glass display
• Octa-Core MediaTek Helio P22 (MT6762) 12nm Processor with IMG PowerVR GE8320 GPU
• 4GB RAM, 64GB internal memory, expandable memory up to 256GB with microSD
• Funtouch OS9based on Android 9.0 (Pie)
• 13MP rear camera with LED flash, f/2.2 aperture, 8MP ultra-wide angle lens, f/2.2 aperture, 2MP secondary camera, f/2.4 aperture
• Dimensions: 159.43 × 76.77 × 8.92mm ; Weight: 190.5g
• Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 2.4GHz, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS
• 5000mAh (typical) / 4880mAh (minimum) battery.
Aqua Blue , Burgundy Red အရောငျမြား ထုတျလုပျထားပါတယျ။ ၂၃၀ ဒျေါလာသတျမှတျထားပါတယျ။
iPhone မော်ဒယ်သစ်အတွက် Display များကို မေလတွင် Samsung စတင်ထုတ်လုပ်မည်
Samsung က မေလမှာ iPhone X Plus အတွက် မျက်နှာပြင်များကို စတင် ထုတ်လုပ်ပေးတော့မယ်လို့ သတင်းထွက်လာပါတယ်။ ဇွန်လမှာ ထုတ်လုပ်မှုကို နှစ်ဆ မြှင့်တင်မှာပါ။ အရင်တုန်းကတော့ ဆမ်ဆောင်းဟာ တတိယ ကွာတား အစ သို့မဟုတ် ဇွန်လကုန်မှသာ စတင် ထုတ်လုပ်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် ယခု အချိန်ဇယားဟာ အနည်းငယ် စောနေပါတယ်။ Apple ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ဖုန်းမော်ဒယ် သုံးမျိုးကို တစ်ပြိုင်နက် မိတ်ဆက်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့အတွက် ဒီသတင်းဟာ ကောင်းတဲ့ သတင်းပါ။ အဲဒီ ဖုန်းများကတော့ iPhone X အသစ်၊ အရွယ်ကြီး iPhone X Plus နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်သင့် LCD Model ( […]
iPhone X ထက် ဒေါင်းလုတ်ဆွဲနှုန်း ၃၇% မြန်ဆန်တဲ့ Samsung Galaxy S9
Posted on May 15, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းရဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကင်မရာ၊ performance အများကြီးပဲနော်။ ဒါပေမယ့်ဖိုင်တွေကို upload ၊ download လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လောက်မြန်သလဲဆိုတာရော အရေးမကြီးဘူးလား။ အင်တာနက်က သင့်အတွက် အရေးပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးဖုန်းကို လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာ Samsung က winner ဖြစ်သွားပါတယ်။ Ookla ရဲ့ လေ့လာမှုအရ Samsung Galaxy S9 နဲ့ Galaxy S9 Plus ဟာ ဒေါင်းလုတ်နဲ့ streaming ပိုင်းမှာ အခြားစမတ်ဖုန်းတွေထက် သာလွန်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်များလဲ။ ၄၂%ကြီးများတောင်ပါ။ CAT 18 LTE modem ကို ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒေါင်းလုတ်အမြန်နှုန်းကို 1.2 Gbps […]
Ultrasonic နည်းပညာနဲ့ Apple Touch ID ကို မျက်နှာပြင်အောက်မှာ တွေ့မြင်ရနိုင်
Posted on May 14, 2018 Author Aung Phyo Oo (Myanmar Mobile App)
Zawgyi Version Apple က Face ID ကို စိတ်ကြိုက်ဂုဏ်ယူလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အသုံးပြုရတာအဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေလည်း ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ ဒီအတိုင်းထားလို့မရပါဘူး။ သမားရိုးကျ fingerprint sensor တွေကို အရှေ့၊ အနောက်မှာ ထည့်မထားတဲ့အတွက်အသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး။ ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေ မျက်နှာကိုဖတ်နိုင်လို့ အသုံးဝင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း မျက်နှာပြင်အောက်က fingerprint scanner တွေက စမတ်ဖုန်းရေစီးကြောင်းအသစ်ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် Apple က ဒါကို တိတ်တိတ်ကလေးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Apple ရဲ့ မူအတိုင်း တစ်မူထူးခြားအောင် လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုရီးယားမီဒီယာရဲ့ တင်ပြချက်ထဲမှာ fingerprint sensor ကို သုံးမျိုးခွဲခြားပြထားပါတယ်။ Optical ကတော့ အသုံးများတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ သာမန်sensor တွေအတွက်သာမက Synaptics ကထုတ်လုပ်ပြီး Vivo မှာအသုံးပြုထားတဲ့ […]
Redmi 7A ရဲ့ ဈေးနှုန်းကို သိရပြီ